Tinye foto gị na nri gị na Photo Size Optimizer, ugbu a ọrịre | Esi m mac
Kwa afọ, ọ dịkarịa ala na oge abụọ, mgbe Krismas gasịrị na mgbe ezumike ezumike, oke oke na-eduga ọtụtụ ndị mmadụ ịnye echiche siri ike nke na-eme ka anyị tufuo kilogram ndị ọzọ anyị jidere mana, Gini na etinye foto anyi na nri?
Ogo nke foto na-aga n'ihu na-akawanye mma yana ya, dịkwa nha na ibu ha. Site na macOS High Sierra anyi nwere sistemụ faịlụ ọhụrụ ugbu a, ọfụma ma ọsịsọ, n'etiti ọtụtụ ozi ndị ọzọagbanyeghị, foto ndị ahụ ka ga-ewere otu oghere ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwekwuo ohere na Mac Ọzọkwa, ike ịkọrọ gị ihe oyiyi mfe na ngwa ngwa, Ikike Foto na-ebuli elur bụ ezigbo nhọrọ, ọbụlagodi ugbu a na ị nwere ike nweta ya na mbelata 97%.
1 Photo Size Optimizer, Mkpa ọkụ foto na gị Mac
2 Na kwa ... Ndebiri maka Okwu MS
Photo Size Optimizer, Mkpa ọkụ foto na gị Mac
Anyị na-amalite taa Tuesday na otu n’ime ọtụtụ onyinye anyị na-ewetara gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị Esi m mac. Ọ bụ «Photo Size Optimizer», a magburu onwe ngwá ọrụ na nke i nwere ike gbanwee ma bulie ogo foto gị elu ruo 80% mkpebi ha mbụ. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ohere nchekwa mpaghara na kọmputa Mac gị, mana ọ ga-adịkwa mfe na ngwa ngwa maka ịkekọrịta ha na netwọkụ mmekọrịta, site na Ozi, email, wdg.
Ọzọkwa, «Photo Size Optimizer» bụ nnọọ mfe iji ngwa; Ọ nwere interface dị mfe iji ma na-enye ohere nha ọzọ ị nwere ike gbanwee otu narị foto site na iji otu ịpị. Iji mee nke a, nanị ịdọrọ folda zuru ezu nke ihe oyiyi n'ime ngwa ahụ, na "Photo Size Optimizer" ga-arụ ọrụ ozugbo, na-enye gị ohere ịhọrọ n'etiti overwriting faịlụ mbụ ma ọ bụ ịmepụta faịlụ ọhụrụ.
«Photo Size Optimizer» na dakọtara na ihe karịrị ụdị oyiyi 70 N'ime ha ụfọdụ bụ ndị ama ama dịka JPG, BMP, PNG, GIF, PDF, RGB, ARW, TIF, XBM, HDR, ICNS, ICO, JP2, PICT, RAW, TIFF na ndị ọzọ.
Zọpụta 20% ohere na-enweghị àgwà ọnwụ mode, ma ọ bụ chekwaa 50% ohere na di ntakiri àgwà ọnwụ, nhọrọ bụ nke gị.
"Photo Size Optimizer" nwere a mgbe price nke € 29,99, Otú ọ dị ugbu a ị nwere ike nweta ya na a 97% ego maka naanị euro 1,09 ekele naanị maka nkwalite mgbasa ozi Mac App Store. Cheta na onyinye a ga-adị ire Ruo echi, Wenezdee, Septemba 27 abalị. Ma ebe ọ bụ na ịzụta zụtara emere ozugbo na Mac App Store, ọ bụrụ na ọ emesịghị eme ka ị kwenye ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya, ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi ma weghachite ego gị.
Ọdịmma nha foto9,99
Na kwa ... Ndebiri maka Okwu MS
You chere n’ezie na anyị ga-asị goodbye na Tuesday ma wetara anyị ihe ọ bụla? Ọ bụghị ***… egwu! Ebe ọ bụ na "Dollar abụọ Tuesday" ha amalitela onyinye ọhụrụ nke, dịka aha ya na-egosi, bụ ngwa a na-akwụ ụgwọ nke na-ewetu ego ya na Tuesday rue dollar abụọ. Na nke a ọ bụ ihe Ndebiri maka MS Okwu, Okenye nchịkọta ndebiri nke ị nwere ike iji maka akwụkwọ Okwu gị.
Ọ bụrụ na n'agbanyeghị na ị nwere Mac ị ka na-ekwesị ntụkwasị obi maka ederede ederede Microsoft, ugbu a ị nwere ike ịrụ ọrụ, akụkọ, na dọkụmentị n’ozuzu ha karịa nke mbụ, agba, ọhụụs, ka ha dọta uche nke ndị ị na-egosi ha. Ihe kachasị mma bụ na ị nwere ike itinye uche gị na ihe dị mkpa n'ezie, ọdịnaya ahụ, n'ihi na emebego ahụ, ị ​​ga-echegbu onwe gị banyere ịbanye ozi ahụ na ịhazi ya ka ọ masị gị site na imezi font nke leta, oke, mgbanwe ma obu itinye ihe oyiyi ...
"Ndebiri maka MS Okwu" nwere ọnụahịa oge niile nke € 19,99, mana ugbu a ị nwere ike nweta ya na mbelata 9% maka naanị euro 2,29 Ruo echi, Wenezdee, Septemba 27 abalị. Ma ebe ọ bụ na ịzụta zụtara emere ozugbo na Mac App Store, ọ bụrụ na ọ emesịghị eme ka ị kwenye ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya, ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi ma weghachite ego gị.
Ndebiri maka MS Okwu site na GN16,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Tinye foto gị na nri yana Photo Size Optimizer, ugbu a na ire ere
iMove na-akwado usoro HEVC nke macOS High Sierra